Welcome from ＃Myanmar Miss Tandar! You are the ＃first person to visit "My ＃homecookingjapan" from Myanmar. I have never visited Myanmar. I will definitely go on this occasion. Please tell mealot. What is Miss Tander wearing on her cheek? It seems like support for ＃soccer. I do not have to put inaspirit like soccer today.
Tander: This isacream ofa＃sunscreen I often use, called "Tanaka" (fig 1). It is not support of soccer. It isavery effective cream. Please also teacher (^ ^). (ミャンマー語)
Tamae: မင်္ဂလာပါ Tander, ＃မြန်မာကနေကြိုဆိုပါတယ်! သငျသညျမြန်မာကနေ "ကျွန်တော့် homecooking japan" သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရှိပါတယ်။ ငါမြန်မာလည်ပတ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျနော်ကျိန်းသေဤအခါသမယသွားပါလိမ့်မယ်။ ငါ့ကိုအများကြီးပြောပြပေးပါ။ အလှမယ် Tander သူမ၏ပါးပေါ်ဝတ်ဆင်ကဘာလဲ? ဒါဟာဘောလုံးအထောက်အပံ့နဲ့တူပုံရသည်။ ယနေ့ငါဘောလုံးကဲ့သို့၌စိတ်ဝိညာဉ်အားထားရန်မရှိကြပါဘူး။
Tander: ဤ "တာနာကာ" (သင်္ဘောသဖန်း 1) ဟုခေါ်တွင်ကျွန်မမကြာခဏအသုံးပြုနိုင်သည်တစ်နေရောင်ကာကွယ်ဆေး၏မုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဘောလုံး၏ထောက်ခံမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအလွန်ထိရောက်သောမုန့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာမ (^ ^) ကိုလည်းပါ။
Source:　HP　Ministry of Foreign Affairs of Japan